Caan-bixiye Caan Ah Oo Loogu Talo Galay Dadka Cusub | Ragga Stylish
Edwin Jagger Qarashka Loo Yaqaano Classic
Kala badh inta u dhexeysa makiinada xiirta iyo makiinadaha la tuuro, mandiillada caadiga ahi way ka jaban yihiin dhibna ma leh maqaarka, gaar ahaan noocyada maqaarka ee xasaasiga ah (caleemaha yar micnaheedu waa cuncun yar iyo timo yar oo soo boodaya), laakiin xoogaa ayey ula qabsadaan.
Inta lagu guda jiro marka hore lagu xiiro mandiil caan ahWaa lama huraan inay sidato baarka badbaadada, laakiin, wixii ka sarreeya, inaad si fudud u qaadatid oo aad feejignaan dheeri ah geliso. Ku dul mari wejiga sida kuwa kale, laakiin dabacsan oo had iyo jeer hoos u dhig. Dadka qaarkiis waxay isbarbar dhigayaan isbeddelka ka soo baxa miskaha kala duwan illaa midka ay la socdaan baaskiil markii ugu horreysay bilaa giraangiraha, taas oo noo muuqata isbarbardhig aad u guuleysan oo kiiskan ah.
Marka ay timaaddo xulashada mandiirkeenna ugu horreeyay ee caadiga ah, way fiicantahay dooro madax go'an. Waa run in kuwa leh madaxyada la hagaajin karo ay oggol yihiin xiirashada shaqsi ahaaneed maxaa yeelay waxaan u wareejin karnaa xagasha daabka sida aan u jecel nahay. Si kastaba ha noqotee, illaa aan ka xariirno xiirashada mandiisha noocan oo kale ah, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho madaxyo go'an, oo ka fudud oo ka badbaado badan isticmaalka.
Si loo helo xakameyn heer sare ah iyo in la hubiyo in xagalka saxda ah la ilaaliyo inta la xiirayo, waa inaan fiiro gaar ah u lahaano ku darista furitaanka balanbaalis. Mindida noocan ah ayaa laga soo dhejinayaa salka hoostiisa, marka daabku isku xirnaadaan, oo tabkuna mar labaad xirmo, daabku si buuxda ayaa loogu hagaajiyaa gudaha. Newbies-ka waa tan ugu badan ee lagula taliyo, sidoo kale raaxada iyo amniga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Sida loogu beddelo mandiil caan ah
Suudhadhku waa Dayrta